Fiitamiinno & Amino acids
Maxaad Dooratay US
API-yada & Dhexdhexaadiyaasha
Labeyond Kiimikooyinka Co., Ltd. waa shirkad Shiinaha-ku-tiirsan & la-hawlgalayaal isku-dhafan oo ka kooban APIs & dhexdhexaadiyeyaal, Waxyaabaha firfircoon ee Cosmetic, fiitamiinnada iyo kiimikooyinka warshadaha, iwm.
Asal ahaan Labeyond wuxuu siinayay maaddooyin iyo dhexdhexaadin macaamiisheena Hindiya, Ganacsigii wuu koray macaamiishooduna waxay eegeen inay naga iibsadaan alaabooyin badan oo kaladuwan, waxayna u tixgeliyeen Labeyond inuu yahay lammaane soo saaraya Shiinaha. Waqti kadib, ganacsigeena waxaa lagu balaariyay dalal kale ama suuqyo sida USA, Mexico, Brazil, Europe iyo Africa.
Shirkadda 'Labeyond' waxay xiriir xiriir la leh muddo dheer la leedahay in ka badan 50 shirkadood oo soo saare ka ah dalka Shiinaha, waxayna ka hirgelisay 3 goobood oo wax soo saar ah magaalada Jiangsu, Zhejiang iyo Sichuan, Shiinaha.
HAL JOOJINTA SOO SAARKA
Labeyond wuxuu bixiyaa hal meel oo isku-dhafan oo kiimiko ah, si loo badbaadiyo shaqada iyo kharashaadka labanlaabay mabaadi'deena. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan kudarno macaamiisha dhinaca kale.
Waxaan aaminsanahay in tayada ay tahay wax walba. Waa qodobka kaliya ee ugu muhiimsan go'aamadeena oo dhan, ilaha aan kasoo iibsano, iyo sida aan kuugu soo gudbino.
Gaarsiinta waqtiga-waa weyn!
Waqtiga la keenayo ayaa had iyo jeer ah waxa ugu weyn ee naga khuseeya.Waxaan la shaqeynaa wakiilo xirfadlayaal ah oo xirfadlayaal ah, shaqaalaheenuna waa 24-saacadood oo ay daawanayaan sida ay wax u socdaan.
KHEYRISKA WAA IN LA IXTIRAAMO
Waxaan ku ixtiraamaynaa Kimistariga, waxa aan jecel nahay. Inta badan shaqaalaheennu waa asal ahaan la xiriirta Kimistariga. Waxaan si qoto dheer uga shaqeyneynaa warshadaha kiimikada si aan u fulino shuruudahaaga.
RM1317 Zhongnan Bldg. A, No. 18 Wadada Zhonghua West, Ganjingzi Dist. Dalian-116031, Gobolka Liaoning, Shiinaha
Hadda na soo wac: + 86- (411) -86505955
Su'aalaha ku saabsan wax soo saarkayaga ama pricelist, fadlan ka tag fariintaada waxaanan kula soo xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood.
Halkan u dir Su'aalo!
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2017: Dhammaan xuquuq dhowran.